I-Android ene-Google noma engenayo: I-Android yamahhala! Iziphi ezinye izindlela esinazo? | Kusuka kuLinux
Nsuku zonke, kuwumkhuba ukusebenzisa isoftware nezinkundla zamahhala, ezivulekile neziphephile, okungukuthi, ezinikela ngezinyathelo futhi ubumfihlo nokuphepha kwamakhompyutha kuqinisekisa. Kusukela emphakathini, umthengi kanye nesakhamuzi bahlala befuna ezinye izindlela kunakho konke okusetshenzisiwe. FUTHI «Android» njengoba «Sistema Operativo», usesweni lokuphikisana, ngobuhlobo bayo obuseduze ne- «Google».
«Google», okukodwa kwe ubuchwepheshe obukhulu beqembu le «GAFAM», yenziwe nge«Android» uhlobo lwesikhulumi sokuzikhangisa kanye nezinsizakalo zalo, okuvame ukucwila kokubi ngokuya ngezinqubomgomo noma amaphutha ezokuphepha nobumfihlo kusho ukuthi. Okwenzile, lezo ezinye izindlela zamahhala ezisuselwe ku- «Android» o «Linux»efanelekile, noma ezinye, ukuze kuzuze bonke.
Ezinye izindlela ezingene emakethe, esikhathini esedlule nanamuhla, ezinye izindlela ebezikade noma ziyingxenye noma sezizonke.
Lokho wukuthi, zisukela ekungavumeli izicelo nezinhlelo ezibucayi zibe namandla aphelele «Google» kuze kususwe nokukhawulwa okuphelele okufanayo, kuze kufinyelele ekusetshenzisweni koHlelo Lokusebenza olusha ngokuphelele olususelwa ku «AOSP (Android Open Source Project)» noma eyodwa kusuka ekuqaleni, njengakwisimo sakamuva se- «Harmony OS» de «Huawei».
1 Ezinye izindlela zamahhala ezigcwele ze-Android kusuka kuGoogle
1.1.1 I-AOSP (Iphrojekthi Yomthombo Ovulekile we-Android)
1.2 Ezinye izindlela ezibalulekile ze-Android
Ezinye izindlela zamahhala ezigcwele ze-Android kusuka kuGoogle
I-AOSP (Iphrojekthi Yomthombo Ovulekile we-Android)
«Android Open Source Project (AOSP)» Eisisekelo noma i-nucleus ye-«Sistema Operativo de código abierto» yamadivayisi eselula aqhutshwa kakhulu yi- «Google». Kodwa-ke, nge «AOSP», «Google» inikeza umphakathi jikelele lonke ulwazi kanye nekhodi yomthombo edingekayo ukudala okwehlukile ngokwezifiso kwe «Sistema Operativo Android».
Futhi, «AOSP» Inikezela ngezinto ezidingekayo ukuze zikwazi ukuyiphatha iye kumadivayisi eselula adingekayo futhi zisekele izesekeli ezenzelwe ipulatifomu «Android», ukuqinisekisa ukuthi amadivayisi ahlangabezana nezidingo zokuhambisana ezigcinwe yiyo yonke imvelo. Inhloso ye- «AOSP» ukuvikela noma iliphi iphuzu eliyinhloko lokwehluleka lapho umdlali oyedwa wemboni angakhawulela noma alawule ukuqanjwa kwanoma yimuphi omunye umdlali.
«/e/» noma i-eelo noma i-e-google njengoba kwaziwa kwesinye isikhathi, empeleni i-ecosystem ephelele yeselula. Isistimu esebenzayo igxile kuzinhlelo zokusebenza nezinsizakalo eziku-inthanethi ezibalulekile ukuze kube nokuhlangenwe nakho okungcono nokwanelisa kakhudlwana komsebenzisi. Ngaphezu kwalokho, inezinsizakalo zayo eziku-inthanethi, ezinjengenjini yokusesha, i-imeyili, isitoreji, namanye amathuluzi aku-inthanethi, akha indawo yobumfihlo ehlukile, esebenza kangcono.
Inhlangano esekela le phrojekthi, «e-Foundation», wenze umphakathi waba yi «Sistema Operativo» kusekelwe «Android», ukuze itholakale ukuze ihlolwe yibo bonke. Ngaphezu kwalokho, izinhlelo zayo nazo zisuselwa ku- «código abierto», futhi ibuye isekele ukwenziwa kwanoma yiluphi uhlelo lokusebenza«Android» ekhona.
«LineageOS»ingumthombo osebenzayo futhi ovulekile Wokusebenza Kwesistimu yamadivayisi weselula ahlakaniphile, ama-laptops, ngisho namakhompyutha, asekelwe «Android». Izalwe njengomlandeli wephrojekthi yakudala ye- «ROM» isiko elaziwa ngokuthi «CyanogenMod».
Ikhishwe ngokusemthethweni ngoDisemba 24, 2016, lapho ikhodi yomthombo itholakala khona «GitHub», Futhi njengezinguqulo ze- «Android», inezinguqulo ezithile zemodeli eyodwa. Kusukela yethulwa kuze kube namuhla, «LineageOS» unayo«ROMs» itholakalela amamodeli wefoni angaphezu kwe-185, ngezigidi zokufakwa okusebenzayo, nomphakathi omkhulu wabasebenzisi.
«PostmarketOS» Kuyinto a«Sistema Operativo»I-Linux iguqulelwe amafoni namanye amadivayisi eselula. Kuthuthukiswe ku «Software Libre» kuzinzile, kugxilwe kubumfihlo nokuphepha, futhi kuyiqiniso kwimodeli yokwabiwa kwendabuko kwe-Linux, ngokuhlukaniswa kwabo ngamalungelo.
Okwamanje, «PostmarketOS» It isakhiwa yiqembu elincane elakhiwe onjiniyela, kubaduni, futhi hobbyists ngenhloso efanayo yokunikeza omakhalekhukhwini umjikelezo wokuphila weminyaka eyishumi. Kusetshenziswa ukwakhiwa okulula nokusimeme okubolekwe ekusatshalalisweni okujwayelekile kwe-Linux, esikhundleni sokusebenzisa «Android» futhi / noma «AOSP». Le phrojekthi isesigabeni sokuqala futhi ayilusizo kubantu abaningi ngalesi sikhathi.
«PureOS» Kuyinto a«Sistema Operativo»umthombo wamahhala ngokuphelele, wokuziphatha futhi ovulekile ongasekelwe«Android» futhi lokho kancane kancane sekwaziwa ngenxa yokusetshenziswa kwensimu engomahambanendlwana ngenxa yokusetshenziswa kwayo kumafoni wesiteleka alo mkhiqizo «Librem» eyenziwe yiNkampani «Purism». Nokho, «PureOS» Kuyi-multiplatform, okusho ukuthi, isebenza kumadivayisi weselula, aphathekayo nedeskithophu, ingafakwa nakumadivayisi wememori ye-USB.
Yenziwe ngendlela yokuthi inikeze umsebenzisi ithuba lokuphinda alawule futhi avikele imininingwane yakhe eyimfihlo, yempilo yakhe edijithali ngokusebenzisa «Sistema Operativo» kusekelwe ngokuphelele ku- «Software Libre y de Código Abierto». Ngakho-ke, «PureOS» iza nesoftware emahhala futhi yamahhala maqondana nokuphepha nobumfihlo ukuze ikwazi ukuvulela iwebhu ngokuphepha, ngaphandle kokulandelwa abakhangisi noma abathengisi. Ngaphezu kwalokho, ikuvumela ukuthi ubethele kalula yonke i-OS nedatha, nge-password yakho. ukubethela.
«Replicant» futhi a «Sistema Operativo» kusekelwe «Android», ikhululekile ngokuphelele futhi isekelwa amamodeli amaningi wamadivayisi, abonakala ngokugcizelela kwinkululeko, ubumfihlo nokuphepha kwabasebenzisi bayo.
«Replicant» Kuyisistimu yamahhala ngokuphelele, kepha imvamisa iza ihlanganiswe nezinto zokuphathelene, njengamashaja ebhuthi, ama-firmwares nesoftware yemodemu, kwezinye izimo. Kodwa-ke, okufanayo, kumadivayisi athile angakwazi futhi ukusebenza, ngokwesibonelo, ama-bootloaders asuselwa ku- «Software Libre».
Ezinye izindlela ezibalulekile ze-Android
Njengoba sibonile, ngokuhamba kwesikhathi nanamuhla, kuye kwaba nemizamo eminingi engaphumelelanga nejabulisayo, noma ebalulekile futhi ephumelelayo yokusebenzisa uhlelo lwe-«Android» kukhululeke kakhulu kusuka ku- «Google» noma ngokuphelele mahhala «Google». Ukuba ngomunye wemicimbi yamanje noma imikhankaso eye «Fundación del Software Libre de Europa»ucingo Khulula i-Android yakho!, esikumema ukuba wazi.
Futhi, kwesinye isikhathi ukwazile ukusebenzisa okukodwa noma ngaphezulu kwalokhu okukhulunywe lapha, sishiyele ukuphawula kwakho maqondana nesipiliyoni sakho, futhi uma nje ufuna ukunikeza umbono wakho, futhi sishiyele umbono wakho ngempikiswano nokunothiswa kwabo bonke ngale ndaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Android ene-Google noma engenayo: I-Android yamahhala! Iziphi ezinye izindlela esinazo?
UJuan Pablo Granados kusho
Lezi zinhlelo ezisebenza ngokusebenza kwe-Android kungenye indlela, kepha ngokubona kwami, uhlelo olufanele lweKernel Operating for Cellphones luyohluka futhi esikhundleni seGoogle bangasebenzisa iDuckduckgo noma iYandex noma enye indlela ekhona, kungekudala kuzoba nezinguquko ukuthi konke izothathelwa indawo kuze kube kungazelelwe kohlelo olufanele lwe-UNIX lwe-PC nocingo
Phendula uJuan Pablo Granados
Vele, okunye kwalokhu okukhulunywe ngakho kusekelwe ku-AOSP, okunye ku-Linux futhi sizobona ukuthi iHarmony OS isilethelani. Ngiyabingelela, Juan futhi ngiyabonga ngokuphawula kwakho.
Ngaphezu kokulandela ngomkhondo noma ukuqapha okukhulu, kunenkinga enkulu kakhulu ngamadivayisi eselula: ukungasebenzi.
Esikhathini esedlule bengisebenzisa i-CM / LineageOS futhi ngisusa izinkinga zokufaka nezokubhoboza ngangijabule kakhulu ngokusebenza. Manje ukuphela kwami ​​kwakudala akusasekelwa futhi okusha akukaze kube nakho. Ngenhlanhla, okwamanje ngisathola izibuyekezo ezivela kumkhiqizi ngemuva kweminyaka emibili.
Ngikushiya umkhankaso othakazelisayo ovela ku-FSFe:
Ukuphawula okuhle kakhulu. Faka isixhumanisi somkhankaso Khulula i-Android yakho! ekupheleni kwendatshana.
@admins, unenkinga ngezinsuku zama-athikili namazwana, i-athikili yangayizolo ivela "njengeminithi elingu-1 eledlule" ngemuva nje kokuthi ivele "njengamahora ayi-16 adlule" noma idethi yosuku oluthile. Kuyaphazamisa.
Mina, ngingumbhali nje wamakhophi. Angikwazanga ukukutshela imbangela kodwa nami ngikuqaphelile. Siyabonga ngokubona kwakho ngalolu daba!
Umbuzo okufanele sizibuze wona ngukuthi….
Bangaki abangathenga ifoni ngaphandle kweWhatsApp? Akekho umuntu, noma ngabe iTelegram noma enye ingcono ngokuphindwe ka-100.
Uma kusetshenziswa ucingo ukuxhumana futhi ungakwazi ukuxhumana nomama wakho, thumela isithombe sekati kumngane wakho eGreenland noma izinto ezinjengalezo, empeleni lokho onakho akuyona ucingo, kuyi-ajenda ye- «geeks».
Ohlwini, okuwukuphela kwento engasebenziseka ngempela yi-LinageOS. Ngiyifakile kwi-MI A1 yami futhi ihamba kahle. Kepha kunjalo, ngezinsizakalo zeG.
Uma ngiyifakile ngaphandle kwabo, okungenzeka (nginezisekelo), kungaba i-ajenda enezingcingo.
Ngeshwa, i-Android ivela kwaGoogle futhi inakho konke okuboshwe kakhulu.
Sanibonani, Zicoxy3. Siyabonga ngokuphawula kwakho nokwethula umbono wakho maqondana nalokhu.
Ngiyavuma ukuthi i-LinageOS iphelele kakhulu ngoba ungafaka i-Gapps kepha i-whatsapp ingafakwa futhi nge-aurora ikugcine usesikhathini ngezinhlelo zokusebenza ze-google ngaphandle kwe-google play.
I-Sailfish ibonakala iqhubekela phambili kodwa akukho okubonakalayo, kepha isitolo se-google sisebenza ngaphakathi.
Ubuntu touch, mhlawumbe isithembiso esikhulu kunazo zonke ngenxa yesisekelo sayo esiqinile nezingcingo ezithile ezitholakalayo.
Kuya ngalowo nalowo, kepha ubumfihlo nenkululeko kunenani, akukho okuzoba lula kepha ukulahla okwejwayelekile kuzosenza sithuthuke.
Ngiyabingelela, Richard. Ukuphawula okuhle nokunikela.
ICloudflare ijoyine isinyathelo sokwengeza ukuxhaswa kwe-HTTP / 3 kumasevisi ayo
IMozilla Imemezela iFirefox Moving to Shorter Release Cycle